Ameeriikaan Waliigaltee daldalaa biyyoota andaara Paasfiik waliin taasifte mormiin mudate. - OMN
Ameeriikaan Waliigaltee daldalaa biyyoota andaara Paasfiik waliin taasifte mormiin mudate.
OMN:Oduu Onk.08,2015 Yunaa’itid Steetiin dabalatee Walii galtee Hariiroo Daldalaa biyyooti andaara garba Paasfik 11 irratti waliif galan Mormii Jabaatu Mudate. Filannoo bara 2016 irrattis dubbii ijoo ta’uuf jiraa jedha maddi oduu CBS.
Walii galteen hariiroo daldalaa Yunaa’itid Steetiin dabalatee biyyoota andaara garba Paasifik 11 jidduutti Mariif dhihaate Paartilee biyyattii lamaan keessaati kan Mormiin isa mudate.
Dingadee addunyaa fooyyeessu irratti shoora guddaa qabaata kan jedhame walii galteen kun kan mormii kaase erga Obaamaa fi waahillan isaanii walii galtee sana irratti walin hojjechaatti turan yaadicha erga kongresif dhiheesaniin booda.
Bakka bu’oota biyyoota hundaa waliin ta’uun walii galtee sana kan labsan bakka bu’aan Ministeera Daldalaa Yunaa’itid Steet, Mikaa’el Foormaan, Akeeki hariiroo daldalaa biyyoota andaara Paasfiik kun guddina Dinagdee fi Hojii kaffaltii wayyaa’aa uumuuf akka ta’edha kan dubatan.
Kongresii keessatti Wal falmii baatii tokkoo ol kan fudhate yaadi kun yoo irratti walif galamee darbe Dinagdee addunyaa harka 40 walitti hidhuuf jiraa jedhan. Darbees, seenaa keessatti walii galtee daldalaa biyyoota jidduutti deemsifamu guddicha ta’uuf deema akka The Gardian.
President Baaraak Obaamaa walii galtee sana otuu hin mal’atteessiniin dura Kongresiinis ta’e uummati Ameerkikaa qabiyyee walii galtee sana tasgabbin dubbisanii akka hubatanif baati tokko laataniif. Walii galteen kun xumuramee na bira ga’ee jennaan Meeshaalee Ameerikaa keessatti Homishamanii fi akkasumas tajaajila keenya addunyaatti gurgurachuuf nu gargaaruura kan jedhan Obaamaan sana qofa osoo hintaane hojjetooti keenya hedduun dorgomii daldalaa kana keessa akka seenaniifillee carraa saaqaa jedhan.
Hata’uutii bara 2016 tti Kaadhimamtoota Presidentummaa ta’anii kanneen Paartii isaanii keessaa dhihaatan, Hilary Kilinteniin dabalatee namooti akka Bernie Sandersii fi akkasumas Ripaaplikaanota keessaa namooti akka Donald Traamp walii galteen kun mal’attaa’ee jennaan Dureesoti Ameerikaa biyyoota hiyyeeyyi fi gatiin humnaa salphaa ta’etti waan dhaqanii hoji jalqabaniif biyya keenyaaf bu’aa hinqabaatuu jechuun yaada sana dura dhaabbatan.
Seneeti keessatti hangan danda’etti walii galteen kun akka hin milkoofneef irrattan hojjedha kan jedhan Bernie Sanders, kan nuti barbaannu imaammata daldalaa hojjetoota biyya Ameerikaa fayyadu malee, Dureesota biyyoota adda addaarraa qabeenya gurguddaa qabaatan horachuu miti jedhan.
Biyyooti andara Paasfik kanneen hafan hegereee dinagdee gabaa addunyyaaf walii galtee bu’a qabeessa jechuun yaada sana faarsan. Mummichi Ministeera Jaappaan Shinzo Abbee walii galteen kun Jaappaan qofaaf otuu hintaane, hegeree Biyyoota Eshiyaa andaara Paasfik jiraniifillee bu’aa guddaa akka qabatu dha kan dubbatan..
Walii galteen kun Filannoo biyyattii bara 2016 kana irratti mata duree guddaa ta’uuf adeema jedhamee eegama.
Gabaasaan Abdii Fiixee ti.
Lammileen Afirikaa kibbaa Hanqina hojii fi kanfaltiin gibiraa dabaluu mormaa jiran.